डाक्टरले युरिया २ सय ६० छ, ब्रेनमा युरिया पुगिसक्यो उहाँको बुबाको, प्लिज चार घण्टा डायलाइसिस गर्दिनु भन्दाखेरी डाक्टरको अगाडि चार घन्टा गर्छु भन्ने तर उहाँ गइसकेपछि तीन घण्टा बनाइदिने त्यसलाई। एक घण्टासमय घटाएर मेरो बुबाको जीवन आयु पनि घटाइदिएको हो, नारायणी अस्पतालले। दिदी हजुरलाई छिटो घर पुग्नु थियो होला। तर, कोही मान्छे घर पुगेनन् क्या, एक घण्टाको हतारले गर्दा। त्यसका लागि अस्पताललाई धेरै धेरै धन्यवाद !
काठमाडौं । स्ट्यान्ड अप कमेडीमार्फत आमदर्शकलाई हसाउँदै आएका आदर्श मिश्रको जीवनमा अलिे ठुलो संकट आएको छ । उनले आफ्नो बाबा बिनोद मिश्रलाई गुमाएका छन् । उनले आफ्नो बाबा गुमाउनुको दोष एनएसी अस्पताल र नारायणी अस्पताललाई दिएका छन् । चार वर्षदेखि मृर्गौलाको रोगबाट पीडित मिश्रका बाबुको डाइलोसिस हुँदै आएको थियो तर अन्तिम अवस्था स्वास्थ्य अवस्था जसटल ुहँदै गएपछि एनएमसी अस्पतालले डाइलोसिस र्न नगरिदिएकोले बाबुको अकालमा मृत्यु भएको आदर्शको दाबी छ।
उनी अहिले आफ्नो बाबुको मृत्युपछि काजकिरियामा छ । आज उनले आफ्नो यूट्वट्यूव च्यानलमा १० मिनेट लामो भिडियो राखेर कसरी अकालमा आफ्ना विरामी पिता ज्यान गुमाए भन्ने बताएका छन् ।
पढौं उनको शब्दमाः
बाबा हुनुहुन्न अब। अनि मेरो बाबाको अवस्था यस्तो हुनुको सम्पूर्ण जिम्मेवार वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज र नारायणी सरकारी अस्पताललाई मान्छु। किनभने दुई हप्ताअघि बाबालाई मिर्गौला डायलाइसिसका लागि लैजाँदा एसपीयो २ सय ९० छ, तपाईंको डायलाइसिस यहाँ हुँदैन भनेर हामीलाई अस्पतालबाटै निकालिदिएका थिए।
चार वर्ष मेरो बाबाले नेसनल मेडिकल कलेज (एनएमसी) मा डायलाइसिस गराउनुभएको हो। अस्पतालले एक पटकको डायलाइसिसबापत् ३५ सय रुपैयाँ सरकारबाटै उठाएको हो। कमाउने बेला तिमीहरूले कमाउने ? बिरामीलाई गाह्रो भएको बेलाचाहिँ धपाइदिनेरु त्यहाँ मेसिन र डायलुजर केही पनि काम लाग्दा छैनन्।
एनएमसीको डायलाइसिस मेसिनलगायत सबै कुराको कन्ट्रयाक्ट लिएको छ, नेफ्रो प्लसले, जुन भारतीय कम्पनी हो। अनि भारतको एउटा नागरिकले जो नेपालमा कार्यरत छ, त्यसले कसरी डायलसिस कसको हुन्छ, कसको हुँदैन भनेर निर्णय गर्न पाउँछरु को बाँच्छ र को बाँच्दैन भनेर कसरी भन्न पाउँछरु
भारतमा कार्यरत मान्छेले यहाँ आएर तलब खाने हो, नेपालका बिरामीलाई हप्काउने होइन। हाम्रो जीवन तिनीहरूको हातमा छैन। नेफ्रो प्लसबाट यिनीहरूले कमिसन खाएर एउटा डायलुजरले १२ वटासम्म डायलाइसिस गरेका छन्, मेरो बाबाको। ८–९ वटा त मिनिमम छ।
मसँग छ सबै लिस्ट। गर्त वर्ष नारायणीमा कोभीड वार्ड बनाउँदा त्यहाँको डायलाइसिस बिरामीलाई एनएमसीमा सिफ्ट गरिएको थियो, डायलुजर मेसिन नफेरेर। नेफ्रो प्लसले पैसा बचाउँन निकै धाँधली गरिरहेको थियो।
एनएमसी हस्पिटललाई गत वर्ष केन्द्रबाट २० प्रतिशत बेड कोभिड संक्रमित बिरामीका लागि छुट्याइदिनू भनेर निर्देशन आएको थियो। तर, एनएमसीले ‘म केन्द्रको आदेश मान्दिनँ’ भन्यो। किनभने एनएमसीको फाउन्डर बसुरिद्धिन अन्सारी हो। अनि, बसुरिद्धिन अन्सारी लास्टै नै पावरफुल मान्छे हो। उसको गुन्डागर्दी अति नै धेरै चल्छ। उसलाई केरमेट गर्ने र चेक गर्ने कोही पनि छैन। ऊ यति पावरफुल मान्छे हो कि गत वर्ष केपी ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जति पनि खर्च भएको हो, उसले व्यक्तिगत रुपमा सबै आफैले व्यहोरेको हो। प्रेस विज्ञप्ति निकालेरै उसले यो कुरा सार्वजनिक गरेको हो।
कलेजमा शुल्क महँगो भनेर विरोध गर्दा गुन्डा बोलाएर विद्यार्थी पिट्न लगाएको हो त्यो मान्छेले। त्यतिसम्मको घटिया अस्पताल हो, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज।
र, एनएमसीको गुन्डागर्दीले गर्दा आज मेरो बाबा मसँग हुनुहुन्न। यसको कुनै सुनुवाइ छैन। कसैले छानबिन गर्नेवाला पनि छैन। कसैले पनि काठमाडौंबाट यहाँ आएर ‘तँ मेडिकल कलेज चलाउनलाई योग्छ छस् कि छैनस्’ भनेर चेक गर्नेवाला छैन।
पैसामात्रै भएर हुन्छ, यार१ पैसामात्रै भएर हुने भए त त्यति साह्रो कमी थिएन नि मसँग। नारायणी अस्पतालले यतिखेर प्रतिशोधको भावना राखिरहेको छ। अस्पताल भनिरहेको छ– एनएमसीले आफ्नो बिरामीको डायलसिस आफै गर्दैन भने हामी किन गर्ने ?
म भन्छु, किनभने हजुर, तपाईंको मेसुले मिडियामा गएर प्रदेश नम्बर २ को जति पनि कोभीड संक्रमित बिरामी हुनुहुन्छ, सबैको डायलसिस म गर्छु भनेर स्वीकार्नुभएको हो।
एउटा मेसिन बिग्रिदा त्यहाँ काम गर्ने नर्स दिदीले फोन गरेर ‘भाइ दुवै मेसिन बिग्रियो’ भन्नुभयो। उहाँलाई कारबाही हुने कि नहुनेरु उहाँले भन्नुभयो, ‘भाइ, सूचना नै निकालिसक्यो।’ जब कि सूचना आएकै थिएन।
मान्छेहरू भन्नुहुन्छ, आदर्शको बुबा छोरालाई लिएर निकै ‘प्राउड’ फिल गर्नुहुन्थ्यो। तर, मलाई कहिल्यै त्यस्तो लागेन। किनभने मैले सकिनँ मेरा बाबालाई बचाउन। बचाउन सकिन्थ्यो होला तर गलत निर्णय लिए हुँला। भरतपुर अस्पताल नलगेर काठमाडौं लानुपर्थ्यो होला !
भरतपुर अस्पतालमा रातभर ‘मेरो बाबालाई १ सय ५ ज्वरो छ सर, ‘बाबालाई होस छैन सर’ भनेर डाक्टरलाई गुहार मागिरहेँ। तर, उहाँले भनिरहनुभयो, ‘एसपिओ ठिक छ भाइ, भाइटल्स ठिक छ भाइ। मैले आइसियोमा राख्दिनु न सर भनेर गुहार माग्दामाग्दै बिहानको १० बजे बुबा बित्नुभयो।.....
बाँकी हेरौं उनकै आवाजमाः